सिईओबाट हटे बोर्डमा जाउँला « Artha Path
सिईओबाट हटे बोर्डमा जाउँला
अशोक राणा, सिईओ, हिमालयन बैंक लि.
ब्याजदर बढ्ने कुरा छैन, हामी सहमतीमै छौं
हिमालयन बैंकलाई मर्ज गर्नुपर्ने जरुरी छैन
अहिले बैंकहरुमा तरलताको संकट बढेको हो ?
त्यस्तै देखिएको छ । अस्ती बैंकर्स एसोसियसनको बैठकमा पनि त्यस्तै कुरा भएको थियो । अहिले बैंकहरुको एभ्रेज सिडि रेस्यो ७९ पुगेको छ भन्दैछन । राष्ट्र बैंकको रिपोर्ट हेर्दा लेण्डिङ बढेको देखिन्छ ।
यस्तो भएपछि दशैपछि बैंकहरुले लोन नै दिन नसक्ने हुन् ?
त्यस्तो त हुँदैन तर कति कमिटमेन्ट गरेका छन बैंकहरुले त्यो आफु आफुले म्यानेज गर्ने कुरा हो । अहिले अलि टाइट चाँही देखिएको छ । अहिले क्यास गइरहेको छ दशैंपछि फेरी फर्किन पनि सक्छ । प्रधानमन्त्रीले पनि मन्त्रालयले समयमै विकास निर्माणमा ताकेता गर्नु भएको छ । समयमै खर्च हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यसबाट इस्पेण्डिङ बढ्छ कि ।
सेकेण्ड क्वाटरपछि ब्याजदर बढ्छ ?
ब्याजदर बढ्ने कुरा छैन, हामी सहमतीमै छौं । गर्भनरज्युले पनि सहमती राम्रोसँग कार्यन्वयन गर्नु नत्र समस्या आउँछ भन्नुभएको छ ।
नेपालका बैंकहरु ह्याकरको टाग्रेडमा छन भनिन्छ नि ?
यस्तो ह्याकरको समस्या त जहाँ पनि छ नि । विश्वमै यस्ता समस्या आएको कुरा हामी समाचारहरुमा पनि आइरहेकै हुन्छ । युरोपतिरका कति एडभान्स टेक्नोलोजी भएकाहरुमा पनि ह्याक भैरहेको हुन्छ । आफुले वेष्ट प्राक्टीस र सेक्युरेटीमा इन्भेष्टमेन्ट गरेर बस्नु राम्रो हुन्छ ।
नेपालको बैंकहरुको सेक्युरेटी स्टम कमजोर हो ?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन । नेप्समा समस्या आएको हो अहिलेसम्म बैंक त ह्याक भएका छैनन नि । नेप्स त बैंकको सहायक कम्पनी हो ।
एटीएम बुथमा सुरक्षा गार्ड राखेर संभव छ ?
त्यो संभव छैन । हाम्रो बैंकको नै झण्डै १ करोड कष्ट बढ्छ । लेभर एक्टको सहमतीले गर्दा एउटा गार्डलाई २४ हजार जति पर्छ । एउटा बुथमा ३ जना गार्ड चाहिन्छ २४ घण्टाको लागी । हामी हेरिरहेका छौं, बैंकहरुलेनै लुटेरा पत्ता लगाएर रिपोर्ट गरिराखेका छन ।
आईटीमा बैंकहरुले लगानी गरेनन् भनेर गर्भनरले पनि भने, बैंकहरुले लगानीनै नगरेका हुन त ?
कतीले के गरे थाहा भएन, पैसामात्र खर्च गरेर हुने कुरा होइन यो । वेष्ट प्राक्टिस हुनुप¥यो । पहिले पहिले आईटी पोलिसि बनाएर पुग्थ्यो कार्यन्वयन हुनुप¥यो । पैसामात्र फालेर समस्याको समाथान हुँदैन ।
आईटीमा बैंकहरुले लगानी गर्न नसकेको कि नचाहेका हुन ?
किन गरेनन् थाहा भएन हामीलेचाँही गरेका छौं । आईटिमा केही कमजोरी छ होला, रिक्स कसरी मिनीमाइज गर्ने भन्ने भन्नेतिर लागिरहेका छौं । सबै बैंकहरुलाई उत्तिकै चासो छ नि खर्चनै नगरी बसेका त छैनन । खाली वेष्ट प्राक्टिस फलो गरेको छ छैन त्यो अडिटबाटै थाहा हुन्छ । नेप्सको ह्याकपछि बैंकका म्यानेजमेन्टमा चेतना आउनुप¥यो ।
हिमालयन बैंकबाट पनि पहिले पैसा चोरिएको थियो नि ?
छैन, ८÷९ वर्ष पहिले चोरी भएको थियो त्यै सबै रिकभरी भैसक्यो । हाम्रो अरु बैंकभन्दा सबैभन्दा शुरक्षित छ जस्तो लाग्छ । हामीले धेरै स्टमहरु हालेका छौं, के के प्रविधि अपनाएका छौं भन्न पनि मिल्दैन र मिडियाले सहजै बुझ्न पनि सक्दैनन् । अरु बैंकभन्दा हामी सुरक्षित छौं ।
अरु बैंकले कुनै न कुनै संस्था मर्ज गरे हिमालयनले अहिलेसम्म कुनैपनि संस्थालाई मर्ज गरेन किन ?
हिमालयन बैंकलाई मर्ज गर्नुपर्ने जरुरी छैन । हिमालयन बैंकले कुनैपनि संस्था मर्ज गर्दैन । हामीलाई कुनैपनि प्रेशर छैन ।
बाफिया पास हुन्छ ?
बाफियाचाँही हेर्नुपर्छ । बाफियामा १/२ ओटा प्रावधानले हामीलाई पनि अफ्टेरो परेको छ । डाइरेक्टर बोर्डको विषयले समस्या पार्न सक्छ । सबै बोर्ड एकैपटक रिटायर्ड भएभने त राम्रो भएन नि ?
सिईओ पनि रिटायर्ड हुने भयो होइन ?
सिईओ त अर्को आइहाल्छ । बोर्डनै रिटायर्ड भयो भने कसरी म्यानेज हुन्छ । यो विषयमा कुरा भैरहेको छ । पेडअप भन्दा बढी वरो गर्न नपाउने कुरा पनि छ । त्यस्तै सेपरेट गर्ने भए भन्नुप¥यो ।
बाफिया करेक्सन हुन्छ त ?
हुन सक्छ कुरा त भैरहेको छ । हामीलाई थाहा हुनुप¥यो को बोर्डमा रहन्छ रहदैन । त्यै अनुसार लङट्रम प्लानिङ गर्न सजिलो हुन्छ । राष्ट्र बैंकले प्रष्ट भन्नुपर्छ अनी हामी त्यै अनुसार काम गछौं ।
२ कार्यकालको प्रावधानले तपाई पनि हट्नुपर्ने भयो हैन ?
ठिकै छ संसदबाट पास भएर लागुभएपछि हट्नुपर्छ । सिईओबाट हटे बोर्डमा जाउँला नि ।
२ प्रतिसत बफर क्यापिटल चार्जले डिभिडेन्ट बाड्न नपाइने भयो होइन ?
योचाँही अलि अफ्टेरो छ । यसलाई टोटल क्यापिटलमा काउन्ट गर्दैन भन्ने छ । बैंकर एसोसिएसनले पनि यो कुरा धेरै गरेको छैन । हामी टोटल क्यापिटलमा काउन्ट हुनछ भनेका थियौं । अहिले हेर्दा छैन रैछ हिमालयन बैंकले राष्ट्र बैंकसँग क्लियरीफिकेसन मागिरहेका छौं । यो मर्जको लागी ल्याइएको हो की भनेर । सबै जनाको उहि क्यापिटल छ भने मर्ज गरे पनि पुग्दैन । किन गरेको भनेर कन्फीयुजमा छौं ।
हिमालयन बैंकको नयाँ प्लानिङ के छ ?
हामीले लाहानमा ६२औं साखा खोल्यौं । अव अरु ३ ओटा नयाँ साखा खोल्दै छौं । अझै हाम्रो साखा कम भयो अरु बैंकको तुलनामा । हामीहरेक वर्ष खोल्ने साखाको अनुपातमै खोलिरहेका छौं । अरुले अन्धाधुन्द साखा खोले भनेर हामी पनि तयै गर्दैनों ।